दिनकाे सपनादर्शी कि साहसी सपनादर्शी | Khabar Dainik
तपार्इं दिउँसाे सपना देख्ने हुनुहुन्छ कि साहसी सपना देख्नेहुनुहुन्छ ?
म याे प्रश्न हल्कारूपले साेधिरहेकाे छैन । वास्तवमा, याे प्रश्नकाे उत्तरले नै ‘गर्ने’ र ‘हासिल’ गर्ने व्यक्तिहरू बीचमा फरक पार्नेछ ।
म तपार्इंलार्इ जहिले पनि जाेखिम उठाउनुहाेस भनिरहेकाे छैन नता साहसी बनी हात खुट्टा भाँच्नुहाेस भनिरहेकाे छु नता काेहीसँग लडाइ गर्नुहाेस भनिरहेछु । तपार्इंकाे नेतृत्वलार्इ कुनै सगरमाथा चढी प्रमाणीत गर्नुहाेस भनिरहेकाे छैन तर म तपार्इंलार्इ के सुझाव दिन्छु भने तपार्इंले अाफ्नाे साहसी अात्माकाे सपनातिर दैनिकरूपमा दाैडिनुहाेस ।
दिनकाे सपनादर्शी र साहसी सपनादर्शी बीच केहि भिन्नताहरू
दिनकाे सपनादर्शी कुरामात्र गर्न मनपराउँछ । साहसी सपनादर्शी काम गर्न रूचाउँछ ।
दिनकाे सपनादर्शी भाग्यमा भर परिरहन्छ । साहसी सपनादर्शी अनुशासनमा भर पर्छ ।
दिनकाे सपनादर्शी गन्तव्स्थानकाे विषयमा साेचिरहन्छ । साहसी सपनादर्शी प्रक्रियामा ध्यान लगाउँछ ।
दिनकाे सपनादर्शी पर्खिरहन्छ । साहसी सपनादर्शीले सुरू गर्छ ।
दिनकाे सपनादर्शीहरू विचलित हुन्छन । साहसी सपनादर्शीहरू ध्यानकेन्द्रित हुन्छन् ।
दिनकाे सपनादर्शीहरू कहिल्यै उदघाटन गर्दैन । साहसी सपनादर्शीहरूले त्यसलार्इ उदघाटन गरेर पच्छयाइरहन्छ ।
दिनकाे सपनादर्शीहरू अब के हुनेवाला छ भनेर साेचिरहन्छ । साहसी सपनादर्शीहरू हुनेवाला कुराहरूलार्इ सक्रिय बनाउदछन् ।
मानचित्र पाउनुभयाे ? साहसी सपनादर्शीहरू कुनै विशेष मानिसहरू जन्मेका हैनन् । तिनीहरू हाम्रै अासपास रहि अाएका छन् । याे हाम्राे कार्य गर्ने पुबलता हाे जसले हामीलार्इ छेउमै बसेर सन्तुष्ट रहने व्यक्तिहरूबाट अलग गर्दछ ।
तपार्इंकाे साहसी सपनालार्इ सक्रिय गर्नुहाेस
तपार्इंले साहसी सपनालार्इ ठीक तृष्णा, वास्तविकता, रणनीति र मानिसहरू बीच सक्रिय गराउनु पर्छ । साहसी सपना प्रतिकाे तपार्इंकाे लगाव र प्रतिबध्दता, दृढताले त्यसलार्इ प्रक्रियामा ल्याउने मूल्य र सम्भाव्यतामा पुर्याउछ । यी साहसी सपनाहरूलार्इ पुरा गर्न अाफुमाथि र समूहमाथि लगानी गर्न नभुल्नुहाेला । किनभने उत्तम सपना कहिल्यै पनि सित्तैमा अाउदैन ।
साहसी सपनाहरूलाइ हासिल गर्ने तीन कदमहरू
साहसी सपनादर्शीहरूले कदमहरू चाली काम गर्दछन् । तिनीहरूले यसरी काम गर्दछन ः
माैकाकाे फाइदा उठाउनु ः साहसी सपनादर्शीहरूसँग माैकाबाट फाइदा उठाउने क्षमता र शक्ति हुन्छ र उनीहरू परिस्थितीहरू भन्दा माथि उठन सक्छन् । तिनीहरू सपनामात्र देख्दैनन् किनभने सपना त तिनीहरूकाे प्रक्रियाकाे भागमात्र हाे ।
परिणामहरूलार्इ कार्यान्वयन गर्छन ः साहसी सपनादर्शीहरूले प्राय अाफ्ना सपनाहरू एकान्तमा राख्दछन् । उनीहरूकाे मनमा सबैकुरा सिध्दसँग काम गर्दछ । तिनीहरूकाे प्रस्तुती पछि भीडले जाेडसँग जयजयकाे खुशी मनाउँछन् । साहसी सपनादर्शीहरूलार्इ थाहा छ कि सपना तिनीहरूकाे लागि हाेइन । त्याे त उनीहरूले प्रभाव पारिरहेकाहरूका लागि हाे ।
प्रक्रिया विकास गर्दछन् ः साहसी सपनादर्शीहरूलार्इ थाहा छ कि अाजकाे दिन उनीहरूकाे लागि महत्वपूर्ण छ । तिनीहरकाे कार्यहरू उनीहरूकाे सपनलार्इ समर्थन गर्न तयार गरिएकाे छ र ति सपनाहरू पुरू गरिरहँदा कति बेला माेड बदलनुपर्छ भनेर उनीहरू तयार छन् ।
असफलतालार्इ शक्तिकाे रूपमा लिन्छन् ः
जीवनकाे हरेक असल कुराहरूलार्इ चारैतिर समस्या, जाेखिम, असफलताकाे सक्षमताले घेरेकाे छ । तपार्इंले धेरै असफलताहरू देख्नुहुने कुरालार्इ खुल्ला रूपले भन्न म यहाँ अाएकाे छु । त्यहाँ ह्रिदय र हड्डीहरू ताेडिन सक्छ । सम्बन्ध भाँचिन सक्छ ।
तर के तपार्इ अझै पनि बच्न सक्नुहुन्छ ? किनभने हरेक असफलता चाहिँ सफलताकाे अपूर्ण प्रक्रिया हाे । त्याे मुख्य कुरा हाे । बाँचिरहनुहाेस ।
किनभने अब जीउदाे लाश हाेइन तर मरेर पनि जीउने व्यक्ति बन्नु अावश्यक छ ।